निषेधाज्ञामा समाजसेवा : अक्सिजन सिलिन्डर बाँढ्दै पल | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
निषेधाज्ञामा समाजसेवा : अक्सिजन सिलिन्डर बाँढ्दै पल
अभिनेता पल शाह समाजसेवामा पनि निकै सक्रिय छन्। पलले कोरोनाको कहरमा होस या बाढी पहिरोको बेला होस सहयोग गरिरहेका छन्। उनले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहदा पनि अक्सिजन सिलिन्डर बाँढिरहेका छन्। हालै मात्र भक्तपुर अस्पतालका कोरोना बिरामीका लागी पलले २३ ओटा सिलिन्डर प्रदान गरेका छन्।
अझै समस्या परेका अन्य ठाँउमा पनि सिलिन्डर बाढ्ने पलले बताएका छन्। ‘हाम्रो टिम नेपाल’ नामक समुहबाट पलले सहयोग गरेका हुन्। पलको एकलौटी सहयोग भने होइन। सोही समुहबाट पलले अन्य ठाँउमा पनि सहयोग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा अत्याधिक व्यस्त रहेका पल एउटै भिडियोबाट लाखौँ कमाउछन्। उनी म्युजिक भिडियोको सुपरस्टारका रुपमा चिनिन्छन्। म्युजिक भिडियोबाटै चिनिएका पलले म्युजिक भिडियोलाई नै प्राथमिकता दिरहेका छन्। जे होस्, आफ्नो कामसँगै समाजसेवामा पनि लागिपरेका पलको काम सराहनिय नै छ।
Previous article‘डाँडाको बर पिपल’ गीतमा गौरी, शिव र सलोन
Next articleनिषेधाज्ञामा समाजसेवा: रेखाले बाँढिन् कुकुरलाई खाना
विवेकसँग रोमान्टिक साम्राज्ञी
चर्चा पल र समिक्षाको !
‘डाँडाको वर पिपल’ हेर्न किन गएनन् दर्शक ?
के कुरा भएको थियो करिश्मा र केपी ओलीको भेटमा ?
सुजन श्रेष्ठ - कार्तिक ५, २०७८
सुजन श्रेष्ठ - कार्तिक २, २०७८
सुजन श्रेष्ठ - कार्तिक १, २०७८